War - luul daawo
Luulku waa dhagax dabiici ah oo dabiici ah, oo lagu soo saaray jaantusyada luul iyo nacre mollusks. Waxaa soo saaray ficil endocrine. Kuullada macdanta ee ay ku jiraan kaalshiyamka kaalshiyamka ah ayaa laga soo ururiyay tiro aad u tiro yar oo ah kristantarrada aragonite.
Isku-darka luul dabiici ah waa ： 91.6% CaCO3, 4% H2O, 4% maadada organic 0.4% walxo kale.
Oo waxaa ku jira noocyo kala duwan oo ah amino acids: Leucine, Methionine, Alanine, Glycine, Glutamic acid, Aspartic acid, iwm. Intaa waxaa dheer, waxay kaloo ka kooban tahay in ka badan 30 nooc oo ah waxyaabo raadraac ah, taurine, fiitamiino hodan ah, iyo peptides.
1, Kaluunka budada ah wuxuu daweyn karaa raaxo darida, kacsanaanta, hurdo la’aanta, iwm. Waxtar ayey yeelan kartaa adoo keligiis isticmaalaya. Budada luul iyo malab ayaa si wada jir ah afka looga wada qaadan karaa, taas oo nadiifin karta kuleylka isla markaana sunta saareysa iyo nidaaminta dabka beerka.
2, budada luul waxay leedahay saamaynta nadiifinta kuleylka iyo ka saarida dabka, baabi'inta sunta iyo xanuunka. Markii la daaweynayo nabarrada afka iyo carrabka, cirridka oo barara, iyo boogaha cunaha, badanaa waxaa loo isticmaali jiray Borax, Indigo Naturalis, Kahor, Scutellaria, iyo Renzhongbai, gebi ahaanba lagu budeeyey budo ka dib la isku qasay, taas oo si wax ku ool ah loogu xallin karo boogta nabarka
3, Codsiga dibedda waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo dhibcaha maqaarka, iyo alaabada daryeelka maqaarka ee leh maaddooyinka budada luul waxay ka hortagi karaan midabka maqaarka waxayna leeyihiin saameynta daryeelka maqaarka iyo quruxda
Ogsoonow sababta oo ah luulyada daawada kuma jiri karaan walxo kiimiko ah, luul laguma dhalaali karo. Luul ka samaysan budada luul guud ahaan waa tayada ugu xun, sicirkuna aad ayuu u jaban yahay.
Xaqiiqdii, luulka badda ayaa sidoo kale laga samayn karaa budada luul, waana ka waxtar badan yahay luul biyo macaan sababta oo ah luulka badda waxaa lagu bartaa badda dhexdeeda macdano dabiici ah oo aad u hodan ah iyo nafaqooyin kala duwan. Jawharta biyaha baddu waa kuwa cusboonaysiinta, qoyaanka badweynta qabow, sidaa darteed saamaynta anti-bararka ayaa ka sii wanaagsan.
Si kastaba ha noqotee, soo saarista luulyada badda ayaa xoogaa yar, inta badan luuluna waxay leedahay nuclei. Bu'da waa in laga saaraa ka hor intaadan shiidin. Qiimuhu waa badan yahay, howshooduna way adag tahay. Sidaa darteed, qiimaha dhulka budada ah ee luul ee luul badeed aad uga qaalisan.
Waqtiga boostada: Jan-29-2021
Huggie Hoops Pearl Hilqado, Murriyado Pearl Bead, Hilqado Khatar Pearl, Hilqado Qurxin Pearl, Hilqado jilicsan Hoops Pearl Hilqado, Hilqado Aroos,